UZO ESI NYEFEE USORO SITE NA HDD KA SSD - SSD - 2019
Otu esi ebufe sistemụ na mmemme site na HDD ka SSD
N'etiti ndị ọrụ PC, e nwere echiche na ọ dịghị mkpa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nyochaa. Ha na-ekwu ihe kpatara nke a ma ọ bụrụ na egosiputa foto ahụ n'ụzọ ziri ezi. Nkwupụta a bụ naanị otu eziokwu. Eziokwu bụ na software ahụ awụnyere ga-ekwe ka onye nyocha ahụ gosipụta foto nke kachasị mma na nkwado na-abụghị mkpebi iwu. Na mgbakwunye, nanị ekele maka ngwanro ahụ nwere ike ịnweta ọrụ enyemaka dị iche iche nke ụfọdụ ndị nlekota. Na nkuzi a, anyị ga-egosi gị otu esi ibudata na wụnye BenQ nyochaa ndị ọkwọ ụgbọala.
Anyị na-amụta ihe nyocha nlereanya BenQ
Tupu anyị amalite usoro nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala, anyị kwesịrị ịchọta ụdị nyochaa nke anyị ga-achọ maka ngwanrọ. Mee ka ọ dị mfe. Iji mee nke a, jiri otu n'ime ụzọ ndị a.
Usoro 1: Ozi gbasara ngwaọrụ ahụ na akwụkwọ
Ụzọ kachasị mfe iji chọpụta ihe nyochaa bụ ile anya n'akụkụ ọzọ nke ya ma ọ bụ na ederede kwekọrọ na ngwaọrụ ahụ.
Ị ga-ahụ ozi yiri nke ahụ egosiri na screenshots.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-egosipụta aha ihe atụ a chọrọ n'aka na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ igbe nke eburu ngwaọrụ ahụ.
Mmetụta nke usoro a bụ nanị n'eziokwu ahụ bụ na a ga-ehichapụ ihe ederede na nyocha ahụ, na igbe ma ọ bụ akwụkwọ ga-efu ma ọ bụ tụfuo ya. Ọ bụrụ na nke a - emegbula. Enwere otutu ụzọ iji chọpụta ngwaọrụ BenQ gị.
Usoro 2: DirectX Diagnostic Tool
Pịa igodo nchikota na keyboard "Merie" ma "R" n'otu oge ahụ.
Na windo nke meghere, tinye koodudxdiagma na-atụgharị "Tinye" na keyboard ma ọ bụ bọtịnụ "OK" n'otu window.
Mgbe DirectX Diagnostic Utility na-ebupụta, gaa na taabụ "Ihuenyo". A na-ahụ ya na ebe dị elu. Na taabụ a ị ga-ahụ ihe niile gbasara ngwaọrụ ndị metụtara ndịna-emeputa. Karịsịa, a ga-egosi ụdị nyochaa ebe a.
Nzọụkwụ 3: Nchịkọta System Diagnostics Utilities
Iji chọpụta ụdị ngwaike, ị nwekwara ike iji mmemme na-enye ozi zuru ezu banyere ngwaọrụ niile na kọmputa gị. Nke a na-agụnye ozi gbasara ihe nyocha. Anyị na-akwado iji ngwaọrụ Everest ma ọ bụ AIDA64. Enwere ike ịchọta nduzi zuru oke n'iji mmemme a na nkuzi nke anyị.
Ihe ndi ozo: Otu esi eji Everest
Iji usoro AIDA64
Ụzọ maka ịwụnye software maka ndị nlekota BenQ
Mgbe a chọpụtawo ihe nlereanya nyocha ahụ, ọ dị mkpa ịmalite ịchọta ngwanrọ. A na-achọgharị ndị ọkwọ ụgbọala maka otu ngwaọrụ dịka maka ngwaọrụ kọmputa ọ bụla. Ọ dị iche dịka ntinye nke ngwanrọ. Na ụzọ ndị dị n'okpuru, anyị ga-agwa gị banyere nuances nile nke nhazi na usoro nyocha software. Ya mere, ka anyi bido.
Usoro 1: akwukwo enyemaka BenQ
Usoro a kacha dị irè ma gosipụta. Iji jiri ya, ị ghaghị ime usoro ndị a.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ukara nke BenQ.
N'elu elu nke saịtị ahụ anyị na-ahụ akara "Ọrụ na Nkwado". Tinye oghere mkpịsị ugodi na akara a na menu menu dabere na ihe ahụ "Downloads".
Na ibe nke mepere emepe, ị ga-ahụ nyocha ọchụchọ ị chọrọ ịbanye na ihe nlele gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịpị "Tinye" ma ọ bụ akara ngosi nke na-eto eto na-esote igbe nchọta.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa gị na ihe nlereanya ya site na ndepụta dị n'okpuru nyocha ọchụchọ.
Mgbe nke ahụ gasị, ibe ahụ ga-aga na mpaghara ahụ na faịlụ ndị a chọtara. N'ebe a ị ga-ahụ ngalaba na akwụkwọ ntuziaka na ndị ọkwọ ụgbọala. Anyị nwere mmasị na nhọrọ nke abụọ. Pịa na taabụ kwesịrị ekwesị "Ọkwọ ụgbọala".
N'ịtụgharị na mpaghara a, ị ga-ahụ nkọwa nke ngwanrọ, asụsụ na ụbọchị ịhapụ. Tụkwasị na nke a, a ga-egosipụta ọkwa nke faịlụ ebudatara. Iji malite ibudata onye ọkwọ ụgbọala achọta, ịkwesịrị pịa bọtịnụ akara na nseta ihuenyo n'okpuru.
N'ihi ya, Archive ga-amalite ibudata na faịlụ niile dị mkpa. Anyị na-echere ọgwụgwụ nke usoro nbudata ma wepu ihe niile dị na Archive gaa ebe dị iche.
Biko mara na na listi faịlụ a agaghi enwe ngwa na ndọtị ".Exe". Nke a bụ ụfọdụ nuance, nke anyị kwuru na mmalite nke ngalaba ahụ.
Iji wụnye ọkwọ ụgbọala nyocha ị ga-emeghe "Onye njikwa ngwaọrụ". Enwere ike ime nke a site na ịpị bọtịnụ. "Merie R" na keyboard na ide na uru nke na-egosidevmgmt.msc. Echefula ka ịpị bọtịnụ ahụ. "OK" ma ọ bụ "Tinye".
Na oke "Onye njikwa ngwaọrụ" mkpa imeghe ngalaba "Monitors" ma họrọ ngwaọrụ gị. Na-esote, pịa aha ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe dị na menu ndị a "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Ọzọ, a ga-agwa gị ka ịhọrọ software ọnọdụ ọchụchọ na kọmputa gị. Họrọ nhọrọ "Ntinye nhazi". Iji mee nke a, pịa nnọọ aha ngalaba ahụ.
Na windo na-esote, ịkwesịrị ịkọwa ọnọdụ nke folda ahụ ebe i bubu ụzọ wepụta ọdịnaya nke ọkwọ ụgbọala ahụ. Ị nwere ike itinye ụzọ onwe gị na akara kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ pịa bọtịnụ ahụ "Nyocha" ma họrọ nchekwa achọrọ site na ndekọ usoro mgbọrọgwụ. Mgbe echisịrị ụzọ ahụ na nchekwa ahụ, pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ugbu a, Wizard Wụnye wụnye software maka BenQ nyochaa onwe gị. Usoro a ga-ewe ihe na-erughị otu nkeji. Mgbe nke ahụ gasịrị ị ga-ahụ ozi maka nhazi nke faịlụ niile. Ighaghachi azụ n'ime listi ngwa ngwa "Onye njikwa ngwaọrụ", ị ga-achọpụta na achọpụtawo ihe nyocha gị ma kwadebe maka ịrụ ọrụ zuru ezu.
Na usoro a nke ịchọta na ịwụnye ngwanrọ ga-agwụ.
Usoro 2: Software iji chọọ ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka
Banyere mmemme ndị e mere iji chọọ ma wụnye software na akpaghị aka, anyị na-atụle na nke ọ bụla na-edere ndị ọkwọ ụgbọala. Nke a abụghị ihe mberede, n'ihi na ụlọ ọrụ ndị dị otú a bụ ụzọ nhazi nke ụwa niile si edozi nsogbu ọ bụla na ntinye ngwanrọ. Nke a abụghị ihe ọzọ. Anyị mere nyochaa ihe omume dị otú ahụ na nkuzi pụrụ iche, nke ị nwere ike ịgụ site na ịpị njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ihe nkuzi: Usoro kachasị mma maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ kachasị amasị gị. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịṅa ntị n'eziokwu ahụ bụ na ihe nyocha ahụ bụ ngwaọrụ a kapịrị ọnụ nke na ọ bụghị ụlọ ọrụ niile dị ụdị a nwere ike ịmata. Ya mere, anyị nwere ike ịchọrọ enyemaka site na DriverPack Solution. Ọ nwere nchekwa data kachasịsịsịsị nke ọkwọ ụgbọala na ndepụta nke ngwaọrụ ndị ọrụ ahụ nwere ike ikpebi. Tụkwasị na nke a, maka nkwekọrịta gị, ndị mmepe emepụtala ma mbipute n'Ịntanet na usoro nke usoro ihe omume ahụ nke na-achọghị ịntanetị njikọ. Anyị kere òkè niile nke ọrụ na DriverPack Solution na isiokwu dị iche iche nkuzi.
Ihe Ọmụmụ: Otu esi eme ka ndị ọkwọ ụgbọala melite na kọmputa gị site na iji DriverPack Solution
Nzọụkwụ 3: Nyochaa Ọkachamara Pụrụ Iche
Iji wụnye software dị otú a, ị ga-ebu ụzọ mepee "Onye njikwa ngwaọrụ". Ihe atụ nke otu esi eme nke a bu ụzọ nke mbụ, paragraf nke itoolu. Tinyegharịa ya ma gaa n'ihu nzọụkwụ ọzọ.
Right pịa na aha nke nyochaa na taabụ "Monitors"nke dị n'ime ya "Onye njikwa ngwaọrụ".
Na menu na-egosi, họrọ akara "Njirimara".
Na windo nke meghere mgbe nke a gasịrị, gaa na sub "Ozi". Na taabụ a n'ahịrị "Ihe onwunwe" kọwaa oke "ID ID". N'ihi ya, ị ga-ahụ uru nke njirimara ahụ dị n'ọhịa "Ụkpụrụ"nke dị ntakịrị ala.
Ikwesiri idetu uru a ma kpocha ya na oru obula obula nke noro na nchọta ndi ozo site na iji ID ngwaike. Anyị ekwuolarị ihe ndị dị otú ahụ na ihe ọmụmụ anyị dị iche iche nke a raara nye ịchọta software site na ID ngwaọrụ. N'ime ya, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu banyere otu esi ebudata ndị ọkwọ ụgbọala site na ọrụ ọrụ ndị dị otú a.
Ihe Ọmụmụ: Ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na ID ngwaike
Iji otu n'ime ụzọ ndị a chọrọ, ị ga-enwe ike ịmepụta ọrụ nke BenQ nyochaa nke ọma. Ọ bụrụ na n'oge usoro nhazi ị zutere nsogbu ma ọ bụ nsogbu, dee banyere ndị na-aza ajụjụ a. Anyị ga-edozi nsogbu a.
Ndị ọkwọ ụgbọala
Idozi nsogbu na igodo vidiyo VKontakte
Ebe iTunes na-eme backups na kọmputa gị
Ngwa nchọpụta 1.3.1
Njehie nsogbu nsogbu 0xc000007b na Windows 7
Ịtọ teepu na Odnoklassniki
Ihuenyo na foto
Ihe ngosi nka - bu nchighari nke ihe oyiyi n'okpuru otutu. Iji mee foto gị na ụdị a, ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ Foto Photoshop, ebe ọ bụ na ọrụ ntanetị pụrụ iche na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emepụta arụmọrụ na-emepụta ihe dị na bọtịnụ ole na ole, nke ọtụtụ foto ya na-egosi na ọ dị oke mma. GụKwuo
Akara puku adreesị IP nke Telegram dabara na-egbochi
Ebee ka ị nwere ike ibudata Windows 8.1 Njikọ Ikike (ụbọchị 90)
https://termotools.com ig.termotools.com © SSD 2019